León, isi obodo Spanish nke Gastronomy 2018 | Akụkọ Njem
Na 2017 ọ bụ ala m, Huelva, obodo prawns, strawberries, hams na ezi tapas ... Ọfọn, anyị nwere onye nọchiri: León, Isi Obodo Spanish nke Gastronomy 2018. Kedu ihe nke a pụtara n'obodo León? Ọtụtụ njem, ọkachasị nke ezigbo gastronomy na nri ndị na-atọ ụtọ na-akpali. Obodo ga-enwe otu afọ zuru ezu, ụbọchị 365 iji rụọ ọrụ 155 ndị ​​a nke mmemme ahụ enyere tupu asọmpi a. León ọ ga-enwe ike ịmasị ndị obodo ma mee ka ndị ọbịa nwee obi ụtọ? N'ezie ee!
Ndi mmadu ndi okacha amara sitere na ụwa nke njem (Turespaña, FITUR, Spanish Confederation of Travel Agencies, Spanish Confederation nke Hotels, Institute of Spanish Tourism Quality, National Paradores), site na ụwa nke ile ọbịa (FEHR, Ire Spain, Ezi Islọ oriri na ọ Resụtaụ Association, Euro-Toques European Community of Cooks, Circle of Centennial Restaurants and Young Restaurateurs), site na ụwa nke nkwukọrịta (ndi oru nta akuko si FEPET) n'ikpeazụ, ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ nke Ministri Ugbo. Nchikota nke uche uche nke ha ji mezue igodo nile na mkpa ndi isi obodo kwesiri inwe.
Na-esote, anyị na-ekpughe ụfọdụ ihe ịtụnanya obodo León na-edobe, ọ bụrụ na mgbakwunye na ịnụ ụtọ nri ya dị mma ịchọrọ ịmasị ihu ala, ụlọ na ọdịbendị nke obodo ya mara mma.
1 Ihe ị ga-ahụ ma mee na León
2 Esie ya, Michelin kpakpando
3 Ahụkarị ngwaahịa nke León
3.1 Tapas dị na León
Ihe ị ga-ahụ ma mee na León
Na León anyị nwere ọtụtụ ebe mara mma ma na-adọrọ mmasị ịga. Nke a bụ ndepụta nke ọtụtụ n'ime ha, ọ bụrụ na, na mgbakwunye na ime ka obi ụtọ nke nri gị na-atọ gị ụtọ na nri dị ụtọ ha, ịchọrọ ịhụ ihe ọma na ihe mara mma:
Katidral León - Santa María de Regla.
Basilica nke San Isidoro na Royal Pantheon.
Ebe akụkọ ihe mere eme nke León.
Lelọ nke Polvazares.
Peñalba nke Santiago.
Plọ Museum Sierra Pambley.
Lọ Ọrụ Ntughari nke Ọdụm Rom.
The square nke ọka.
Chọọchị Mozarabic nke Santiago de Peñalba.
Nwanyị Nwanyị Parish nke Ahịa.
Old Nọn nke San Marcos.
Lọ nke Templars.
Dịka ị pụrụ ịhụ, na León ị nwere ọtụtụ ọnụ ọgụgụ nke ebe ịga ma leta. Ọ bụghị ihe niile ga-eri!
Ma mgbe ị na-eje ije ma na-eme oge na afọ, anyị na-elekọta iwetara gị nhọrọ na ụlọ mmanya na ụlọ nri kachasị mma ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ nri ndị a na-ahụkarị na mpaghara ahụ. Ọ bụrụ na ịmaghị gastronomy nke León, nke a bụ ohere ime ya. Mgbe ọ ka mma ma ọ bụrụ na ọ bụghị n’afọ afọ gị nke gastronomic?
Esie ya, Michelin kpakpando
"Esie ya"Nke a bụ aha ụlọ oriri na ọ restaurantụ wellụ a maara nke ọma na León na a Michelin kpakpando, naanị otu onye nọ n'ógbè ahụ. Ebe adighi mma na akpa gi. Ọ bụ ebe ị nwere ike iri nri nke ọma, nọrọ jụụ, rie ezigbo nri dị mma ma ghara ịkwụ ụgwọ akụrụ maka ya ... recommendedlọ ọrụ akwadoro nke ukwuu, n'enweghị obi abụọ.
Ahụkarị ngwaahịa nke León
Ma, gịnị ka ị na-eri na León? Onye ọ bụla maara na na Valencia ọ bụ mmehie ịbụ na-enweghị na-agbalị otu n'ime ha paellas, ma ọ bụ ndị a ma ama pan tomaca si Catalonia, ma ọ bụ prawn si Huelva, prawns si Sanlucar ma ọ bụ salmorejo si Córdoba ... Ma, Kedu ngwaahịa ndị a na-ahụkarị ma dị mma na León? Kedu ihe isi obodo Gastronomy nke 2018 na-etu ọnụ?
Ngwaahịa ya na-ahụkarị chorizo ​​de León, cecina na ọtụtụ chiiz ya.
Tapas dị na León
Ma ọ bụrụ na tapas bụ ihe gị ma si ebe a gaa ebe ahụ na-anwale ihe kachasị mma na ebe ọ bụla, mgbe ahụ anyị ga-agwa gị mpaghara ndị a ga-akwaga ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale ihe dị ụtọ na nke ọma.
Uzo iru mmiri: Ọ bụ otu n'ime mpaghara León ebe ikuku na-adị mgbe niile ma amaara ya na mpụga ala ya. Ebe i nwere ike ịhụ saịtị dị ka Azọpịa (na Calle Cardiles nọmba 2), Nweghachi (na Plaza San Martín nọmba 9) ma ọ bụ Gaucho (Azabachería n'okporo ámá nọmba 6).
Ihunanya Nkeji iri na ise: N'ebe a, ị nwere ike ịchọta site na nri Leonese dị iche iche na ekpomeekpo sitere na Far East. Azụ ụlọ (Plaza Torres de Omaña nọmba 2) ma ọ bụ Ebe obibi biya Las Tapas (Juan Lorenzo Segura street number 4) bụ ezigbo ebe abụọ ị nwere ike ịga leta ma ọ bụrụ na ị gafere mpaghara ahụ.
Anyị nwere olile anya na ọ bụghị naanị na ịmara León, obodo ukwu nke ọtụtụ ndị na-amaghị nke nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye, mana na ị nwere ike iwetara anyị ntakịrị ihe "esi" ebe ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Gastronomy » León, Spanish Isi Obodo nke Gastronomy 2018
A ije site na Enchanted Forest nke Madrid n'etiti dragons na adaeze